5 Email Nhare Dzemafambiro Aunoda Kuti Ufunge Nezve | Martech Zone
Chimwe chezvinhu icho chatinowanzoita kuteerera kucherechedzwa kwetraffic yedu uye nemitengo yakavhurika kubva panguva imwecheteyo mwedzi wapfuura kana nguva yakafanana gore rapfuura. Kuongorora ako metric uye kuona kuti uri kuita mushe sei kwakakosha - asi iwe zvakare unofanirwa kugadzirisa kuti vatengi vari kuchinja sei. Nharembozha ndeimwe yenzvimbo idzo kwaunofanira kuteerera sezvo manhamba acho akasiyana zvakanyanya nekufamba kwenguva.
Mumakore mashoma apfuura nhare yakura kudzora chikamu chakakosha chenzvimbo yeemail. Ino vhura, inoverenga kwakatenderedza 50% yeiyo yakazara anovhura mukati megore, ita optimizing kune nhare chinodikanwa kune ese emarketer. Nekudaro, nepo nhare ichiwedzera kukosha kwayo, desktop uye webmail zvichiri chikamu chakakura chekushambadzira email. Kuti ikubatsire kukwidziridza yako email chirongwa chekubatana nevatengi vako, yedu nyowani infographic inosimbisa shanu dzakakosha mafoni maitiro aunofanirwa kuziva nezvazvo.
Mune ino infographic, 5 Mobile Trends kubva ReturnPath, iwe unowana imwe inonakidza shanduko mune hunhu hwekushandisa nhare:
Vanopfuura makumi mashanu muzana emaemail ese avhurwa parunhare mbozha. Maemail ako akagadzirisirwa kuona nhare?
Email yakavhurika mitengo iri kuenda kune yakaderera maitiro sezvo isu tinoswedera padyo neKisimusi zuva. Wanga uchitumira here?
Kushandiswa kwepiritsi kwakaenzaniswa nekushandisa nhare hakuna kuchinja zvakanyanya mugore rapfuura.
Kuparadzanisa vateereri vako nenyika kunogona kukonzera maitiro eemail akasiyana kwazvo pakati pemapuratifomu nemidziyo.
Kana iwe uri mune imwe indasitiri, iwe uchaona mhedzisiro dzakasiyana zvakanyanya kupfuura mabhenji eemail.
Tags: desktop email yakavhura mitengodesktop tsambanharembozha emailnharembozha email yakavhura mitengonharembozha email maitironharembozhamobile marketingnhare dzakavhurikanharembozhabackpathpiritsi emailpiritsi email inovhura mitengotsamba yepiritsi
Iyo Dhijitari Zera Iri Kukurumidza Kuchinja Zvese